1. ဆော်လမွန်ငါးမျိုးသည်အဆင်သင့်သုံးနိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောဆော်လမွန်ငါး ညစာအတွက်၎င်းတွင်ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုကပ်ထားသည်။ ဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူအရသာနေ့လည်စာ ထို့အပြင်အမျိုးမျိုးသောဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ရန်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် ဆော်လမွန်တွေ၊ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်စားဖိုမှူးတစ်ယောက်ဘယ်လိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်။ အဆင်ပြေပါကလုပ်နိုင်ပါတယ်
3. ပထမ ဦး စွာပစ္စည်းကိရိယာများအဆင်သင့်ဖြစ်ရမည်။ ကြီးမားသောဆော်လမွန်ငါးများကိုပုံမှန်စီမံရန် ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုကြီးသောတံတွေးတစ်လုံး ၀ ယ်ရန်သင်အသင့်ရှိနေရပါမည်။ သင်ရှာတွေ့နိုင်သလောက်ကြီးကြီးယူလိုက်ပါ။ ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ၊ ဒါဟာဒယ်အိုးပေါ်ရှိအမဲသားအများစုကိုလှန်ပြီးလှည့်ပေးနိုင်တဲ့လှံတံဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ထို့အပြင်ငါးလွှာများကိုလှပစွာပြင်ဆင်ထားသည့်ပန်းကန်များထဲသို့မျိုချနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ဒါပိုကောင်းလျှင် ငါးလွှာဖမ်းရန်လှံတံဝယ်ခြင်း ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
4. နောက်ပိုင်းတွင်အသားသတ်ရန်သင့်တော်သော“ သံပြား” ကိုငါရှာသည်။ ထို့နောက် Stick pan ကိုအရည်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ပူပြင်းတဲ့မီးဖိုထဲကနေရနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုကိုရှာပါ။ နောက်ထပ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအားဖြည့်ထားသောသံမဏိပြားများထည့်ထားသောဒယ်အိုးဖြစ်သည်။ ဒယ်အိုး၏သံသည်ယိုယွင်းမသွား၊ မီးဖို၌မြင့်မားသောအပူထိတွေ့သောအခါ ပြီးတော့ (ပုံထဲမှာ) လှိုင်းတံပိုးအမျိုးအစားကိုလည်းကင်များအတွက်သင့်လျော်သည်။
5. ဒါကနောက်ထပ်မရှိမဖြစ်တစ်ခုပါ။ အပ်နှာခေါင်းသေးငယ် (ဒါက pinzers လိုပါပဲ) ငါးရဲ့ pin အရိုးကိုဆွဲထုတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်သောအရွယ်အစားကို ရွေးချယ်၍ အကြမ်းခံ။ အရည်အသွေးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရမည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆော်လမွန်၏ pin အရိုးများသည်အလွန်အားကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည် အရိုးများကိုဆွဲထုတ်ခြင်းသည်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ရမည် အဖြစ်ကောင်းစွာလှပသော texture ရရန်
6. နောက်ဆုံးအရာကသားရေစက္ကူသို့မဟုတ်လူမီနီယံသတ္တုပါးကိုပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကမီးဖို (ငါး en papillote) နှင့်вкладышဒယ်အိုးကင်ဒယ်အိုးထဲသို့ထည့်မည့်ငါးလွှာအတွက်သုံးရန်။
7. ဆော်လမွန်၏ pinbones ဖယ်ရှားရေး။
8. ဆော်လမွန်ငါးအသားလွှာကိုဘုတ်ပေါ်တွင်တင်ပါ။ အကြီးစားဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ်သင်ကမီးဖိုချောင်ကောင်တာပေါ်မှာသတ္တုပါးပေါ်မှာထားနိုင်ပါတယ်။ အပြင်အဆင်ပါ အရေပြားကိုမျက်နှာမချပါနှင့်။ (အရေပြားမပါဘဲ) ၎င်းသည်ထွက်လာသောအရိုးသေးသေးလေးကိုထိရန်သင့်လက်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုကြည့်ရန်။ ပြီးတော့အသားရဲ့အထူဆုံးဆုံးမှာစတယ် အရိုး၏အဆုံးကိုခိုင်မြဲစွာဆုပ်ကိုင်။ ဆွဲထုတ်ရန်အပ်နှာခေါင်းထိုးတံများကိုအသုံးပြုခြင်း။
9. မီးဖိုပေါ်မှဆော်လမွန်ချက်ပြုတ်ခြင်းသည်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မီးဖိုမသုံးချင်ရင် (သို့) မသုံးချင်ရင် ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် SAUTEING နှင့် POACHING တို့ပါ ၀ င်သည်။
10. Sauting Sautéing salmon ဟာမြန်ဆန်တဲ့အပူကိုသုံးပြီးငါးကြိမ် ၁ ကြိမ်သာလှည့်ခြင်းဖြင့်ကြော်ပါ။ ဤနည်းလမ်းသည်ချက်ပြုတ်ရန်လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်
11. အလယ်အလတ်အပူကျော်ပြီနောက်ဟင်းထဲမှာထောပတ် 1 ဇွန်းအရည်ပျော်။ ထောပတ်ပြိုကျပြီးမှောင်မိုက်သောရွှေရောင်စုစုပေါင်းကို ၃ မိနစ်ခန့်လှည့်ပါ။
12. ဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းကိုဒယ်အိုးထဲဖြန်းပြီး ၆ မိနစ်လောက်စောင့်ပါ။ ထိုအခါငါးကျော်လှည့် ဒယ်အိုးထဲမှာလက်ဝဲ (ငါးနှင့်အနောက်သို့မပြန်ပါနှင့်) နောက်ထပ် ၂ မိနစ်မှ ၄ မိနစ်အထိအရသာရှိရန်ချက်ပြုတ်သည်အထိစောင့်ပါ။
13. POACHING သည်သင့်အားကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ပြီးလှပသောအရောင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သောပြုတ်ဆော်လမွန်ငါးမျိုးဖြစ်သည်။ အဆီမပါဘဲငါးကိုအပြည့်အဝချက်ပြုတ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအခြေခံနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။
14. ငါးသားများကိုဒယ်အိုးထဲသို့ထည့်ပါ။ ထိုအခါငါးအသားကိုဖုံးလွှမ်းရန်လုံလောက်သောဒယ်အိုးထဲသို့ရေထည့်ပါ ထို့နောက်ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ပင်လယ်အော်အရွက်အချို့ကိုဖြန်းပါ။
15. ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၊ ထို့နောက်အပူကိုပိတ်ပါ၊ ဒယ်အိုးကိုဖုံးအုပ်။ ငါးချက်ပြုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မိနစ် ၂၀ မှ ၃၀ ခန့်ကြာသည်။ * ဤကိစ္စတွင်ရွေးချယ်ထားသောဆော်လမွန်သည်အလတ်စားမှအကြီးများဖြစ်သင့်သည်။